एकसाथ दुई लिम्बू फिल्मकाठमाडौँ, अनामनगरस्थित मण्डला थिएटरमा एकसाथ दुई लिम्बू संस्कृतिमा आधारित फिल्म प्रदर्शन गरिँदै छ। सूर्यप्रकाश चेम्जोङ निर्देशित 'पेकोसाःमा' र 'सिवा खाहुन' कात्तिक २२ र २९ गते प्रदर्शन हुने भएको हो। दुवै...	पराकम्पन र मुटुको धड्कनसामाखुसीका कृष्णगोपाल श्रेष्ठ वैशाख १२ गतेको भूकम्पअघि स्वस्थ थिए। तर, भूकम्प र त्यसपछिका लगातारका कम्पनले उनी अस्वस्थ भए। भूकम्पपछि मुटु चस्केजस्तो हुने, ढुकढुकी बढ्ने र चक्कर लाग्ने समस्या आएपछि उनी...	विचलित कांग्रेस चुनाव र चरित्रदिग्भ्रमित र विचलित नेपाली कांग्रेसको अर्को महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। सिद्धान्तच्युत प्रकृतिबीच निर्वाचन पनि भयो। केहीले जिते, धेरैले हारे। कुनै मुद्दा र विचारबिना उम्मेदवार बनेका थिए। प्रभाव र पहुँच, पैसा...	'अभिनय र जीवनबीच मसिनो रेखा हुन्छ'काठमाडौँ, अनामनगरको पूर्वीगेट अगाडिबाट पूर्व हेर्योप भने 'प्रभु भान्छा घर' भन्ने बोर्ड भएको अग्लो घर देखिन्छ। त्यो बोर्डमुनि नेपाली रंगमञ्चका 'जिनियस' सुनील पोखरेलको नयाँ 'सेल्टर' छ। छ तलामा रहेको नयाँ...	कांग्रेससँग तर्क छैन
04 Mar 2016 शुक्रबार २१ फागुन, २०७२
युग पाठक कांग्रेसको तेह्रौँ महाधिवेशनको मूल प्रश्न के हो ? मिडियामा चलेका बहस र चर्चा सुन्दा खास गरी दुइटा प्रश्न उठेका देखिन्छन् । पहिलो, कांग्रेस हाँक्ने नयाँ नेतृत्व को हुने ? दोस्रो, युवा नेतृत्वले यो महाधिवेशनमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्छ कि सक्दैन… विस्तृतमा
नागरिक नेपाली कांग्रेसको १३ औँ महाधिवेशन फागुन २० देखि २३ गतेसम्म काठमाडौँमा चल्दै छ । महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ । देशभर तथा शुभेच्छुक संगठनबाट समेत गरी ३ हजार १ सय ८८ जना प्रतिनिधिले निर्वाचनमा भाग लिँदै छन्। व्यक्तिवाद हाबी हुने… विस्तृतमा
नागरिक संसद्देखि सडकसम्म देशमा जहीँतहीँ बेथिति छ । यसका झलकहरू सडकमा अझ प्रस्टसँग देखिन्छन् । सवारी चालक लाइसेन्स बोक्दैन, ब्लुबुक पनि बोक्दैन । ट्राफिक प्रहरी चेकिङ गर्छ । तर, नियमअनुसार केही पनि हुँदैन । 'सेटिङ गर्ने', 'कुरा मिलाउने', खल्तीमा पैसा हाल्दिने… विस्तृतमा
03 Mar 2016 बिहीबार २० फागुन, २०७२
नागरिक प्रसिद्ध लेखक खगेन्द्र संग्रौला नेपाली साहित्यमा अनुवादको जग हाल्ने व्यक्तिहरूमध्ये एक हुन्। उनले थुप्रै किताब अनुवाद गरेका छन्। 'अजम्मरी गाउ"' (भियतनामी उपन्यास), 'फूल बेच्ने केटी' (उत्तर कोरियाली अपेरा), याङ मोको उपन्यास 'युवाहरूको गीत', लु स्युनको जीवनी, कटहरे खाडी (चिनिया" नाटक),… विस्तृतमा
शुक्रवार सम्पादकीय नेपाली कांग्रेसले १३ औँ महाधिवेशनपछि लिने नीति र कार्यक्रमबारे सर्वत्र चासो देखिन्छ। संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले बदलिँदो परिस्थितिमा लिनुपर्ने नीतिबारे थुप्रै सल्लाह–सुझाव पनि पाइसकेको छ। कांग्रेसमा आस्था राख्ने र कांग्रेस इतरका विश्लेषकहरूले अबको कांग्रेस कस्तो हुनुपर्छ? भन्दै निरन्तर सुझाव… विस्तृतमा
सुजित मैनाली महाधिवेशनको चटारोमा रहेको नेपाली कांग्रेसभित्र विचार नभई अमुक नेता चयनको प्रसंगले मूल प्राथमिकता पाइरहेको छ । समाजवाद स्थापनार्थ गठन भएको भनिएको नेपाली कांग्रेसले समाजवादलाई राष्ट्रियतासँग जोड्न कुनै समय मेलमिलाप नीति अवलम्बन गरेको सम्झिएर नेपाली कांग्रेस अहिले समाजवाद र मेलमिलाप नीति… विस्तृतमा
27 Feb 2016 १५ फागुन, २०७२
नागरिक कन्फ्युजन अर्थात् अन्योल । यो गरूँ कि त्यो गरूँ ? यहाँ जाऊँ कि त्यहाँ जाऊँ ? यस्तै–यस्तै अन्योलमा छन् आजका तन्नेरी । आज के गर्ने ? भोलि के बन्ने ? भविष्यमा के हुने ? खास गरी आफ्नो करिअरलाई लिएर उनीहरू… विस्तृतमा
20 Feb 2016 ८ फागुन, २०७२
डिबी खड्का लोकगीतले लोक, अझ भनौँ, नेपालीका दुःखसुखका कथा भन्नुपर्ने हो। हाम्रा मौलिकता र संस्कृतिलाई बचाउनुपर्ने हो। तर, अचेल लोकदोहोरीले संगीतकै हुर्मत लिन थालेको छ। लाजै त्यागेको छ लोकदोहोरीले। शब्द सस्ता र दुईअर्थी छन्। म्युजिक भिडियोहरू यति 'भल्गर' हुन्छन् कि तिनले शरमका… विस्तृतमा
मेलिसा होगेनबुम मानिसले मात्रै चुम्बन किन गर्छ र बाँकी जीवले किन गर्दैनन्? चुम्बन प्रकृतिप्रदत्त स्वभाव हो या मानिसको कृत्रिम अविष्कार? यसै विषयमा बीबीसीको अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित एक रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत छ। विस्तृतमा
StartPrev…45678…NextEndPage6of 113	भर्खरै...